Vaovao - ny lakilen'ny ivelany ary ny bokotra anatiny
Fantatsika rehetra fa ny lakilen'ny fiara dia mitana andraikitra lehibe rehefa te hihazakazaka eny an-dalana ny fiara. Noho izany, ny lakilen'ny fiara dia tena zava-dehibe amin'ny fiara. Raha mbola manana ny lakilen'ny fiara ilay namana manana fiara ao amin'ny fianakaviana, na fiara elektrika ianao, na fiara na bisikileta aza, dia misy karazana lakilasy hitantsika, ny karazana lakile tsirairay avy dia samy manana ny mampiavaka azy, ary ny fomba sy ny masinina alehantsika any amin'ny fivarotana fanidiana dia samy hafa. Ka inona no mahasamihafa azy ireo? Andao atomboka amin'ny dingam-pamokarana ny takelaka fanidiana (raha misy fitsipiky ny hidin-trano raha tsy azonao izany dia amporisihiko ianao hamaky ity lahatsoratra manaraka ity: fanasokajiana ny hidin-trano Shrapnel ny hidin'ny fiara). Fantatsika fa ny hidy novokarin'ny hidin-trano samy hafa dia mahatonga ny lakile hanana karazany telo: fikosoham-bary fisaka, fikosoham-bary ivelany, ary ny fikosoham-bary anatiny. Ireo karazany telo ireo dia Izy io dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fifangaroana voajanahary amin'ilay tapa-hidin-trano. Alohan'ity dia hamelabelatra hevitra ho an'ny rehetra aho, izany hoe ny lakilen'ny lakile, inona ny lalan-dehibe, io dia manondro ny fitambaran'ny teboka fiasan'ny lakile napetraka ao anaty varingarina hidy.
Fanasokajiana lakile mekanika ho an'ny fiara
Voalohany: lalana tokana fikosoham-bary fisaka
Ny fanalahidin'ny fanodinana fisaka tokana dia manondro ny fanalahidin'ny fikosoham-bary fisaka miaraka amina lalana iray ihany no miasa. (PS: Raha misy làlana roa eo amin'ny fanalahidy fa raha mbola mandeha ny làlana iray dia antsoina hoe làlana tokana fanodinana io) Amin'ny ankapobeny, ny lakilen'ny fiara kely elektrika, ny arimoara ary ny hidin'ny kabinina vy dia ireto karazana lakile ireto, toy izao manaraka izao Mampiseho ny sary:
Fanasokajiana fanalahidy mekanika fiara, sary fanasokajiana fanalahidy fiara
Fanasokajiana fanalahidy mekanika fiara, sary fanasokajy lakilen'ny fiara
Faharoa: fikosoham-bary fisaka roa
Ny lakilen'ny fikosoham-bary roa-lalana dia manondro ny lakilen'ny fikosoham-bary fisaka izay iarahan'ny lalana roa amin'ny fanalahidin'ny fikosoham-bary miaraka. Amin'ny ankapobeny, io karazana hidim-baravarana io dia hita amin'ny moto, van, kamio, kamio, Buick Excelle, Kia K2, Toyota Vios, ny ankamaroan'ny fiaran'ny Nissan, ary ny ankamaroan'ny fiara an-trano latsaky ny 100.000 yuan amin'ny ankapobeny. , Araka ny aseho etsy ambany:
Fahatelo: fanodinana anatiny lalana roa
Ny fanalahidy roa fanamafisam-peo anatiny dia midika fa miasa ireo làlambe roa an'ny fanalahidin'ny fikosoham-bary, ary ireo làlam-by hafa dia tsy mandeha. Amin'ny ankapobeny, io karazana lakile io dia ampiasaina amin'ny fiara elektrika antsy kely, varingarina mihidy C-level an'ny varavarana miady amin'ny halatra, ary ny ankamaroan'ny hidin'i Volkswagen, Audi, ary BMW no lakilen'ity karazana hidin-trano ity. Ity sary manokana ity dia aseho amin'ity sary manaraka ity:
Fahefatra: fikosoham-bary anatiny efatra
Ny lakilen'ny fikosoham-bary anatiny dia manondro ny fanalahidin'ny fikosoham-bary ao anatiny izay iasan'ny lalana efatra an'ny fanalahidin'ny fikosoham-bary. Amin'ny ankapobeny, io karazana lakile io dia hita ao amin'ny Toyota Crown, ary ny fiara maoderina sasany, Lexus, sns no karazana lakile ireo, ny lakile dia aseho amin'ity sary manaraka ity: